Iva mutori wenhau wemitambo: Tiri kutsvaga kusimbiswa kwechikwata chekunyora
Tiri kutsvaga kusimbiswa kwechikwata chevapepeti
Iva chikamu chechikwata
Zvese nezvemitambo kubvira 2014
unogona kuita izvozvo
Tave tichitamba kwemakumi emakore - uye kubva 2014 tanga tichinyora nezve yedu yekuzvivaraidza zuva rega rega. Yakatangwa seyakachena bhodhi mutambo portal, isu ikozvino tinovhara akawanda misoro yeanalogi uye yedhijitari yemitambo yenyika - nekufamba kwemakore zvevaraidzo zvakawedzerwa, zvinosanganisira mafirimu, akatevedzana uye mabhuku.
“Unogona kusvika pakuziva munhu zviri nani muawa imwe kupfurikidza nokutamba kupfuura mugore kupfurikidza nokukurukura.” - Plato
Kuita kuti vamwe vanakidzwe nemitambo
Tiri kutsvaga vanyori venhau kuti vasimbise timu yedu yekudhirowa: Iwe uri mutambi ane shungu, firimu fan kana iwe unofarira dzakateedzana? Iwe unosevha internet zuva rega rega uye uchinyatso kutora mishumo yeindasitiri? Ungade here kutora chikamu mune edhita basa revaraidzo portal uye zvakare kupa mazano? Iwe unowana iwo mazwi akakodzera here kana zvasvika pakupfuudza ruzivo rwako rwehunyanzvi kuvaverengi? Zvakanaka, pamwe tiri kukutsvaga ipapo.
Iwe unotsvaga wakazvimirira kana mukubvunzana pamusoro pemisoro yakasiyana-siyana kubva munyika yemitambo nevaraidzo, nyora mishumo yenhau uye gare gare zvakare bvunzo uye wongororo pane zvazvino zvigadzirwa pamusika. Kuda kuziva ndicho chakakwana chinodiwa chinodiwa: haufanirwe kungofarira kutamba chete, asi zvakare kuratidza kufarira muindastiri.
Munguva yako induction, isu tinovimba nechimiro uye kutsigirwa: iwe unodzidza matanho ekutanga nekunyora mishumo yenhau, une mukana wekuzvinatsiridza iwe pachako uye nekutsvaga maitiro ako.
Gare gare unoburitsa zvinyorwa zvako wakazvimirira uye wakazvironga wega. Zvinoenda pasina kutaura kuti kana ukanyanya kushingaira, iwe unokurumidza kudzidza kugona kugona kwezuva nezuva basa rekudhirowa.
Masampuli ebvunzo anozopihwa kwauri mushure menguva yakakodzera yekudzidziswa nehurongwa. Uye: Unogona uye unofanira kunyorawo nezvemitambo yaunofarira yaunayo.
Kana iwe uchivimbika uye uchida kuziva, uye usazeze "basa" rekuda kwako, saka taura nesu uye uzvipire semunyori.
Iwe unogona ikozvino kutora chikamu munzvimbo idzi
Mitambo yekutamba nepeni & bepa
Zvinyorwa zvakawanda pamwedzi: Chiyero chinoenderana nemusoro wenyaya - huwandu hunotangira kubva kupfupi nhau dzemashoko anosvika mazana mana kusvika kuzvinyorwa zvakareba zvemashoko zviuru zviviri.
Chiitiko: Isu hatikudze timu yekudhirowa nekuda kwehukuru hwechikwata. Isu tinosarudza diki, rinoshanda denderedzwa revanyori kune boka revanyori vanozopa zvishoma kana kusatombopa. Kwete pasina chikonzero…
kuda kudzidza: ...nekuti iwe unofanirwawo kutora chimwe chinhu kubva panguva yako nesu, kunyanya zviitiko zvemazuva ese ebasa rekupepeta. Naizvozvo tinonyatso fungidzira kuda kudzidza.
Chinja: Iwe unofanirwa kunge uine makore angangoita gumi nemasere.
Kufarira kwedhipatimendi rako: Hatidi kungozivisa chete, tinoda kuti vamwe vafarire mitambo nevaraidzo. Unofanira kurarama izvozvo.
Kuvimbika mumitauro: Kuvimbika kweGerman, kutaurwa uye kunyorwa, chinhu chinosungirwa. Iwe unofanirwa kunzwisisa Chirungu.
Kuvimbika: Tinofanira kukwanisa kuvimba nemi. Iwe unofanirwa kuchengeta hurukuro uye kuvimbika mukukurukurirana kwemukati.
Vapepeti vane ruzivo kuti vakubatsire: Tave "mubhizimisi" kwemakore, dzimwe nguva kunyange nguva yakazara. Iwe unogona kubatsirwa kubva pane izvi uye udzidze kubva kwatiri izvo zvakakosha mune yakagadzirwa nemaoko mutambo wenhau.
Mafungiro akasununguka: Iyo Spielpunkt portal ibasa redu, saka unogona kutarisira mhepo yakasununguka. Zvakadaro, isu tinoita zvinodiwa pamhando - izvi zvinoshanda kune zviri mukati pamwe nemaitiro.
Maonero ebasa rekunyora: Zviri zvemitambo uye zvinonakidza, asi kune zvakare basa rekunyora kuseri kweprojekiti yedu. Isu tinoshanda zvisina kusiyana nemahofisi makuru ekunyora.
Mikana yekutora chikamu mumitambo yekutengeserana uye magungano (nehurongwa): Kushanyira misika yekutengeserana, magungano nemisangano haingori yekuzorora, asi chikamu chezvinyorwa zvedu zvenhau. Mushure meiyo induction nguva uye mukubvunzana, isu tinokupawo iwe kuwana kune zviitiko. Unogona kushuma live pane saiti.
Sample yekuyedza (mushure mekubvunzana uye nguva yekudzidziswa): Ongororo, mutambo uye bvunzo dze Hardware chikamu chakakosha che yedu portfolio yemisoro. Iwe unogona zvakare kuvhara nzvimbo iyi kana iwe wakagara uye uchishanda.
Mukana wekubatanidzwa nemazano: Unogona kuunza mazano ako. Iwe haufarire kunyora uye ungada kuita mavhidhiyo kana kurekodha podcast? Sei zvisingaite, tinogona kuita zvirongwa pamwe chete newe kana kuzvipira kwako kuri iko.
Une mibvunzo here kana kuti hauna chokwadi chekuti unofanira kutora chikamu here? Ingotitumira e-mail kuitira kuti tigone kujekesa chero kusava nechokwadi usati wanyorera.
Unoda kutisimbisa munyaya iyi: * Sarudza...Mitambo yebhodhiminiaturesRollenspielePeni & PepaLARPVhidhiyo mitamboHardwareMovieSeriesBücherGeek zvinhu / matoyi
Ini ndiri wekutanga
Maawa epamwedzi anowanikwa ekushandiswa kwekunyora *
Links kune mareferensi angu